ကွန်ပျူတာ သန့် ၇ှင်းေ၇း ။ ပေါ့ပါးမြန်ဆန်သွက်လက်ရေး။ ?? - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ကွန်ပျူတာ သန့် ၇ှင်းေ၇း ။ ပေါ့ပါးမြန်ဆန်သွက်လက်ရေး။ ??
ရလာဒ်များကိုကြည့်မည်: ကွန်ပျူတာ ပေါ့ပါးသွက်လက်အောင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းသင့်ပါသလဲ
နေ့ စဉ် စီစစ် သန့် ၇ှင်ပေးရမည် 37 64.91%
တခါတလေမှသာ ၇ှင်းလင်းမည် 20 35.09%
ကွန်ပျူတာ သန့် ၇ှင်းေ၇း ။ ပေါ့ပါးမြန်ဆန&
ကျွန်တော် member အသစ်ပါ။ အားလုံးကို နှုတ်ဆတ်ပါတယ် .
ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေ ကျန်းမာရေးကောင်းပြီး ပေါ့ပါးမြန်ဆန်သွက်လက် နေ အောင်
အပြန်အလှန် ဗဟုသုတတွေ ဖလှယ်ကြတာပေါ့ ။
ပြန်စာ ၊ ဝေဖန် မှုများ နဲ့ဝေမျှကြတာပေါ့
DK Finder တဲ့ ။ Hardisk ထဲက ဖိုင်တွေကို ရှာရာမှာ သုံးပါတယ်။ ၀င်းဒိုး ထဲက Search ထက်ပိုမြန်ပါတယ်။ ဖရီး ပေးတာပါ။
သူ့ ဆိုက်မှာဘဲ ဒေါင်း လို့ရပါတယ်။
Last edited by nyinyi mt; 13-09-2009 at 12:07 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 57 ဦးတို့မှ nyinyi mt အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စွမ်းကမ္ဘာ, ဆန်းမောင်, ညီမလေးဟေ, ထွန်းဝင်းနိုင်, ဒဿဂီရိ, နယ်သူ, ပဲခူးသား, ဖိုးထိန်, ဖယောင်း, မင်းခကို, မင်းညိုစော, မမထွန်းထွန်း, မိုးမိုး, သက်နိုင်, အမောင်စိုး, ဦးအသေးလေး, ကောင်းအိ, ဇေယျာမင်းထက်, ဇော်ရဲပိုင်, နေသစ္စာ, မောင်သံသရာ, မောင်ဇော်ဇော်အောင်, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်ကျော်မျိုး, အောင်ကျော်ဆန်း, အေးဇော်ဆွေ, ငြိမ်းချမ်း, ကြက်ဥခေါက်မုန့်, ဖြိုးယံလေး, နိုးတူး, AZM, bonge, centurymg, chitnyimalay, crush, Gateway, khunsoemoethu, ko min, ko myo, ko sai, ko ye, kyawkyi123, linthuraaung, lulin, mgwinhlaing, moe gyi, mttwin, pannuko, rosygirl, shwegyinthar, shwemyay, swannyee, unique, whiteman, yarzar2983, yelinoo, yemin7
13-09-2009, 12:24 PM
ဟိုဖတ်ဒီဖတ် ကြည့်ရင်း တစ်ခုတွေ့ မိလို့ပါ
ဒီပို့ စ်နဲ့ သင့်တော်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်
ဒီမှာမတင်တာလဲကြာပြီ.... အဲဒါကြောင့် ဒီနေမှာဘဲထပ်တင်လိုက်ပါတယ်
အထဲမှာနှစ်ခုရှိပါတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့ ဗိုင်းရပ်စ်ရှင်းတာလေးပါ။တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်။နာမည်ကြီး I Love You နဲ့ PrivateCam တွေကိုသတ်တဲ့ နေရာမှာ တစ်ခြားနည်းတွေနဲ့ သတ်လို့ရပေမဲ့ ဒီဟာလေးလောက်တော့ ဘယ်ဟာမှ အလုပ်သက်သာမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး double click လိုက်ရုံပဲ။I Love You ကို double click လိုက်ရင် restart ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ပြန်တက်လာရင်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဘာမှမရှိတော့ဘူး။အကောင်းကြီးပဲကျန်နေမှာပါ။ ဟို webcam ဗိုင်းရပ်စ်ရောနော်။
ဒီနေရာမှာက ပထမတစ်မျိုး ပါ။
နောက် ဒီမှာက ဒုတိယတစ်မျိုး ပါ။
Last edited by nyinyi mt; 13-09-2009 at 12:26 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 37 ဦးတို့မှ nyinyi mt အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုအောင်, ခိုင်မြဲ, စွမ်းကမ္ဘာ, ဆန်းမောင်, နယ်သူ, ပွင့်ဖူးမွန်, ဖိုးထိန်, မိုးတိန်, မိုးမိုး, ရှင်းသန့်, ဝင်းအောင်, ကျော်ထက်ချိန်, ဇေယျာမင်းထက်, ဇေယျာအေး, တောကကို၇င်, မောင်သံသရာ, မောင်ဇော်ဇော်အောင်, ငြိမ်းချမ်း, ဖြိုးယံလေး, နိုးတူး, aozora, aungthuhtet, blackNwhite, bobochanmyae, bonge, crush, lokasara, lusoelay987, maungwanna, mgwinhlaing, redcoke, sobhanalankara, theinzaw5949, thityaraik, yelinoo, yemin7, zinnaing
ပြန်စာ - ကွန်ပျူတာ သန့် ၇ှင်းေ၇း ။ ပေါ့ပါƟ
ဟတ်ဒစ်ကို တစ်ပတ်တစ်ခါ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး
ဗိုင်းရပ် ခဏခဏ စစ်ပေးရင် ပိုကောင်းလိမ့်မည်လိုထင်ပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ နေမင်းကို အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စွမ်းကမ္ဘာ, တောကကို၇င်, မောင်သံသရာ, bobochanmyae, crush, Gateway, mgwinhlaing, yelinoo
Find More Posts by နေမင်းကို
တစ်ယောက်စီရဲ့ လုပ်ပုံလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့် ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်
အဲဒါမှ မတူတာလေးတွေ နဲ့ ပိုပြည့်စုံမယ်ထင်ပါတယ်
တစ်ချို့စက်မှာက လုပ်လို့ရပြီး တစ်ချို့က လုပ်မရတာတွေရှိမှာမို့ပါ
ကျွန်တော်က ၁ ပတ်တစ်ခါ disk clean up
တစ်လ တစ်ခါ defrag
antivirus avast free version နဲ့ သုံးလေးရက်တစ်ခါ လုပ်ပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ khunsoemoethu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, bobochanmyae, crush, mgwinhlaing, yelinoo
ဒီလိုတင်ပေးထားလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဒီလိုကွန်ပျူတာနှင့်ပတ်သက်သော စာများများတင်ပေးစေလိုပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ မောင်သီဟ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စွမ်းကမ္ဘာ, မောင်သံသရာ, နိုးတူး, bobochanmyae, mgwinhlaing, yelinoo
Find More Posts by မောင်သီဟ
ပို့စ် 15 ခုအတွက် 56 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
မလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေက်ု ရှင်းပစ်ရင် ပိုပြီးမြန်စေပါတယ်
start ကိုနှိပ်ပါ Run box ကို ဖွင့်ပြီး %temp% လို့ ရိုက်ထဲ့ပြီး ပေါ်လာသမျှ ဖိုင်တွေအားလုံးကို
ဖျက်ပစ်ပါ။ အလုပ်လုပ်နေဆဲ ဖိုင်တွေကိုတော့ ဖျက်လို့မရသေးတဲ့အကြောင်း ပြောပါလိမ့်မယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ moe gyi အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စွမ်းကမ္ဘာ, တောကကို၇င်, မောင်သံသရာ, centurymg, kyi zaw, mercury, mgwinhlaing, MilkyWay, yelinoo
moe gyi ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by moe gyi
အခုလို တင် ပေးထားတာ ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော် ကမန်ဘာအသစ်လေး ပါ
စွမ်းကမ္ဘာ, ထိန်လင်းမောင်, mgwinhlaing, yelinoo
ပို့စ်3ခုအတွက် 21 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော် ပြောချင်တာလေး တစ်ခုရှိပါတယ်ဗျာ
အဲဒါကဘာလဲဆိုတော့ run ဆိုတဲ့ ဘောက်ကလေး နေ ရှင်းဒါမျိုးတွေ လိုပါပဲ
ဒီကနေသွားပြီးဒေါင်းလော့ချမယ်ဆိုရင် ရပါတယ် အဲဒါလေးကို run ပြီး run clear ပေးနေရင် ရပါပြီခင်ဗျာ
ကျန်တာကိုထပ်ရှင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ %temp% ကနေရှင်းပေါ့ဗျာ
run ကနေ ခေါ်တဲ့ command လေးတွေလည်း ပြောပြလိုက်ပါတယ်
start>>run>>>ခေါ်ပြီး prefetch/temp/%temp%/recent/ အဲဒါတွေကိုတစ်ခုချင်းစီခေါ်နော်
သူတို့နဲ့ ရှင်းရတာ ကြာမှာဆိုးလို့ ခုန ဆော့ဝဲလေး ကိုတစ်ခါတည်းပေးလိုက်တာပါဗျာ
သိပြီးသားသူတွေ အတွက်အသုံးမဝင်ပေမဲ့ မသိသေးသူတွေ အတွက်တော့ အဆင်ပြေပါစေဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင် 12 ဦးတို့မှ သူရဦး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခိုင်မြဲ, စွမ်းကမ္ဘာ, သန့်ဇင်ဌေး, ဇော်ဇော်၀၁၁, မောင်သံသရာ, bonge, mgwinhlaing, MilkyWay, shwemyay, yarzar2983, yelinoo, zo
Find More Posts by သူရဦး
30-01-2010, 05:25 PM
ပြန်စာ - ကွန်ပြူတာ ကျန်းမာရေး
ကျွန်တော်လဲ avest သုံးပါတယ်။ ပထမတစ်မျိုး ဆိုတဲ့စာကိုနှိပ်လိုက်တာ virus ရှိနေကြောင်း avest alarmမည်လာပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ thuranaingwin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စွမ်းကမ္ဘာ, မောင်သံသရာ, linthuraaung, mgwinhlaing, yelinoo
Find More Posts by thuranaingwin
ပို့စ် 22 ခုအတွက် 81 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အားလုံးက ခေါင်းစဉ်နဲ့ တင်ပြချက်နဲ့လွှဲနေသလိုပါပဲ စက်ကို အဓိက ပေါ့ပါးချင်တယ် မြန်ဆန်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံးစက်ကို ( system unit )ပုံးကိုဖွင့်ပြီး အထဲမှာရှိနေတဲ့ တစ်ခုချင်းစီကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ အဓိကကတော့ HDD , CUP , momery card တို့ကိုခွာပြီးသန့်ရှင်းစေချင်ပါတယ် ကွန်ပျူတာမှာ ပျက်စီးစေတဲ့အကြောင်းအရင်းက ဖုန်ကြောင့်က 70% လောက်လို့ထင်ပါတယ် ကျန်တာကတော့ စက်မှာ ကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ application တွေကို မလိုအပ်ရင် မတင်ထားဖို့ပါပဲ သူတို့တွေက Hdd space ကို နေရာယူထားရင်လည်း စက်ကို မလိုအပ်ပဲ ထိုင်းမှိုင်းစေပါတယ် အဓိကကတော့ HDD ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့နဲ့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ဆိုတာ က အခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ application တွေကို ဖြုတ်ချပစ်လိုက်ဖို့ပါပဲ နောက်ပြီး ဖုန်တွေကိုလည်း သန့်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါ လိုအပ်တာများရှိရင် ဖြည်စွက်ပြီးပြောစေချင်ပါတယ် ကျွန်တော်ကတော့ သိပ်တတ်နေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး စေတနာအရင်းခံနဲ့ သိသမျှလေးကိုပြောပြတာပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ မြှားနတ်မောင်၅၂၈ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စွမ်းကမ္ဘာ, လမ်းပြကြယ်, ဝင်းကျော်ဦး, မောင်သံသရာ, နိုးတူး, ah nai, mgwinhlaing, yelinoo, zo
Find More Posts by မြှားနတ်မောင်၅၂၈
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ဖိုးခွား အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သန့်ဇင်ဌေး, မောင်သံသရာ, mgwinhlaing, yelinoo
Find More Posts by ဖိုးခွား
Microsoft Excel မှာ Formula function က Format လေးတွေ သုံးချင်လို့ အဲဒီလေးရှင်းပြပေးပါရှင်
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ soe.tintin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စွမ်းကမ္ဘာ, mgwinhlaing, yelinoo
Find More Posts by soe.tintin
Originally Posted by မိုးကြီး
တော်ကြာအားလုံးဒလိနဲ့ဖြတ်လိုက်ရင် ဘာတွေဖြစ်သွားမလဲမသိဗျ ကျွန်တော်က နားမလည်လို့ပါနော်
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ thetzin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စွမ်းကမ္ဘာ, mgwinhlaing, yelinoo, zo
Originally Posted by သူရဦး
အကိုရေ ဒေါင်းတာကတောဒေါင်းလိုက်ပြီဗျ မရှင်းသေးလို့ ဟီးကျွန်တောကနားမလည်းဘူးဗျ
သူကဒတ်စတော့ပေါ်ကိုတောရောက်လာတယ် ပြီးတော့ သွားနေတာပဲ...........
အင်တီဗိုတ်ရပ်ဆော့ဝဲလဲရှိနေတောလေ မဆိုင်ဘူးလားဆိုင်လားလို့အကိုမေးကြည့်တာပါ............အကိုတင်းပေးတဲ့ဟာက မလိုအပ်တဲဖိုင်တွေကို ရှင်းပေးတာလားဗျ နားလည်အောင်သေချာရှင်းပြပါနော်အကို စောင်နေမယ်
စွမ်းကမ္ဘာ, ထွန်းဝင်းနိုင်, မောင်သံသရာ, mgwinhlaing
Originally Posted by thetzin
ရပါတယ် ကို thetzin
အားလုံးကို ဖြတ်ပစ်လိုက်ပါ ကိစ္စမရှိပါဘူး
shift del နဲ့သာ ဖြတ်ပစ်လိုက်ပါ
Run box ထဲမာ ကွန်ပျူတာသုံးပြီတာနဲ့ ကျွန်တော်ကတော့
တွေကိုရိုက်ပြီး shift del သာ ဖြတ်ပစ်တယ်ခင်ဗျ
ဒီဖိုရမ်မာပဲ ကျွန်တော်လည်း ဖတ်ရတာ
တခုစီရဲ့ အသုံးဝင်ပုံတွေကိုတော့ ကျွန်တော် မရှင်းပြပေးနိုင်တာကို ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ
သိတဲ့ အစ်ကို အမတွေက ၀င်ပြီးဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ ထွန်းဝင်းနိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စွမ်းကမ္ဘာ, ထိန်လင်းမောင်, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, centurymg, mgwinhlaing, moe gyi, zo
ccleaner ကကွန်ပျူတာကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးတဲ့ software လေးပါ
click လုပ်ပြီး analyze လုပ်ပါ ပြီးရင် run clean ကိုလုပ်ပါ window ကို clean ပါ
application ကိုသွားပြီး analyze လုပ်ပါ run clean ကိုလုပ်ပါ
ပြီးရင် registry ကိုလုပ်ပါ Fix selected issues.. လုပ်ပါ ပေါ်လာတဲ့ message box မာ နိုးပေးပါ
Fix all issues ကိုပေးပြီးရင် ရပါပြီ ကို thetzin
နောက် software လေးတော့ ရှိသေးတယ်
Tunup 2010 ပါ clean လုပ်တာပါပဲ
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ ထွန်းဝင်းနိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခိုင်မြဲ, စွမ်းကမ္ဘာ, မောင်သံသရာ, mgwinhlaing, zo
ကဲ ကိုthetzin ရေ
Tunup 2010 ပါ ယူပြီးသုံးကြည့်လိုက်ဦဗျ
password ကတော့ www.myanmarfamily.org ပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ ထွန်းဝင်းနိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စွမ်းကမ္ဘာ, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, 6yannaing, bachitdin, mgwinhlaing, muanthang92
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြေားရရင် ကျွန်တော်က ကွန်ပျူတာကိုသိပ်ပြီးနားမလည်သေးဘူး
အခုလိုမြန်မာဆိုဒ်တွေလိုက်ကြည့်ပြီ နားလည်လာတာပါ.........ဒီဆိုဒ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့လို ဘာမှမသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ကတော တကယ်ကို တန်ဖိုးကြီးမားပါတယ်..........အာလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ thetzin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အားလုံးကိုကျေးဇူးပါဗျာ....အိုကေသွားပါပြီ နောက်လဲမကြာမကြာ တင်ပေးကြပါနော်.....မိသားစုဖိုရမ်ကအကိုအမတွေလဲ ထာဝပျော်ရွှင်ပါစေ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ဒေသမောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ဒေသမောင်
ဒုတိယတစ်မျိုး ဆိုတာက ဒေါင်းလို့ မရတော့ဘူး ထင်တယ်။ no such file လို့ ပြနေတယ်။ ပြန်စစ်ပေးပါဦး။
ပို့စ် 12 ခုအတွက် 21 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပျက်မှလည်းပျက်ရော... ကိုယ်ကွန်ပျူတာမှမဟုတ်တာ ... ပိုင်ရှင်လာရှင်းလိမ့်မယ်....
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ နတ်မင်းကြီး ၂၀၁၀ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နတ်မင်းကြီး ၂၀၁၀ ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by နတ်မင်းကြီး ၂၀၁၀
နတ်မင်းကြီး ၂၀၁၀ ရေ..
အကိုရေ ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ အဲသလို စာကြောင်းတိုများ မလိုအပ်ချက်များကို ဂရုစိုက်ပေးပါလားဗျာ..
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဖိုရမ်မှာ စာကြောင်းတိုလေးနှင့်ပို့စ်တွေက အရမ်းများနေပြီ စာမျက်နှာတွေ
အကိုကလဲ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပိုင်ရှင်လာရှင်းလိမ့်မယ်ဆိုပေမဲ့ မတော်ခဲ့ရင် ဖိုရမ်အမိူက်ပုံး
ထဲရောက်သွားပါအုံးမယ်.. တကယ့်လို ဒီဖိုရမ်ရဲ့ မန်ဘာအသစ်လေးဆိုရင်လဲ ဖိုရမ်ရဲ့
ကြေငြာချက်များ ဆိုတဲ့ field ကိုဖတ်စေချင်ပါတယ်ဗျာ..
ကျနော့်ကိုလဲ ဆရာလိုလိုဘာလိုလို focus ထားပြီးပြောတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ဗျာ..ဖိုရမ်ကိုချစ်တော့
အမှားများပါခဲ့ရင်လည်း သည်းခံနားလည်ခွင့်လွတ်ပေးဖိုး တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ..
post#18 မှာ ကိုထွန်းဝင်းနိုင်ရေ အကိုက Tuneup 2010 ဆိုဒါကိုပေးချင်တဲ့အတွက်
Tune Up Utilites collection ဆိုတဲ့
topic ကိုသွားပြီး အဲဒီမှာတင်လိုက်ပါ..ပြီးရင် လင့်ခ်ညွန်းလိုက်ပေါ့ဗျာ..ဒါဆိုရင် နောက်များမှာရော
ခုလက်ရှိမှာကော function tab ကိုသွားပြီး Tuneup collection လို့ရိုက်တည့်လိုက်ရင်
အကုန်ရပြီပေါ့ဗျာ... တင်ပေးတဲ့အကို့ရဲ့ စေတနာကိုလဲ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..
အမှားများပါခဲ့ရင် သည်းခံခွင့်လွတ်ပေးပါလို့ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်...
စွမ်းကမ္ဘာ, ဆန်းမောင်, ဝင်းကျော်ဦး, ဇော်ဘုန်းလှိုင်, မောင်သံသရာ, အောင်ဗလ, arkaraung, aungthuhtet, k k, KznT, mgwinhlaing, Moe Lay, Myo Min Zaw, smlat88, zo
Start>Run>Prefetch> အားလုံးကို shitf+Delete နဲ့အရင်ဖျက်ပါ။
Start>Run>Regedit>HKEY_CURRENT_USER > Control Panel>Desktop>MenushowDelay မှာ
စွမ်းကမ္ဘာ, မောင်သံသရာ, ko4aung, mgwinhlaing
အကို ကျနော်ကို window7နဲ့ ပတ်သက်ပြီ စက်ကို လည်း မ လေး အောင် လို့ လုပ်တယ် နည်း rgistry cclear စာအုပ်လေး ကို mediafire လေး နဲ့ တင်းပေးပါ နော် နောက်ပြီတော့ ကျနော်စက်မှာ desktop photo background ပုံ တွေကို 10 လုပ် ထား ရင် အဲဒီ 10 ပုံက slide show ဖြစ်အောင် ဘယ် လုပ် ရ သလည်း အကို လုပ်တယ်နည်း လေးကို ပြောပြ ပါနော် အားကိုပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ မျိုးကြီး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စွမ်းကမ္ဘာ, မောင်သံသရာ, mgwinhlaing
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ သန်းထွဠ်အောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by သန်းထွဠ်အောင်
ကျနော်စက်မှာ desktop photo background ပုံ တွေကို 10 လုပ် ထား ရင် အဲဒီ 10 ပုံက slide show ဖြစ်အောင် ဘယ် လုပ် ရ သလည်း အကို လုပ်တယ်နည်း လေးကို ပြောပြ ပါနော် အားကိုပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
windows7မှာ desktop background က အလိုအလျောက် slide show ပုံစံပြောင်းပါတယ်။ right click > Personalize > Desktop Background > Browse ကနေပြီး Background ထားချင်တဲ့ ဓာတ်ပုံဖိုင်တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါ၊ Change picture every: မှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အချိန်ကိုရွေးပေးပြီး Save changes ပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။ အဆင်ပြေပါစေ။
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ PyaitSone အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စွမ်းကမ္ဘာ, ဇာနည်စိုး, မောင်သံသရာ, mgwinhlaing, pannuko, zo
တကယ်တော့ computer ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်နည်းဟာ နဂိုကတည်းက မိမိကွန်ပျူတာရဲ့ Window မှာ ပါပြီးသားပါ သေချာစွာဖတ်ပြီး လုပ်ဆောင်ပေးမည်ဆိုပါက ပုံမှန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်
မိမိUSB stick ထဲဒေတာတွေကူးလို့မရရင်(သို့) Writeprotect ဖြစ်နေခဲ့ရင်ကွန်ပျူတာထဲကို ဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုက်သွားတဲ့အခါ။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့် Memory Stick ကို အခြားစက်မှာ ထိုးမိပြီး
မိမိစက်ကိုပြန်ထိုးလိုက်တဲ့အခါ လျှို့ဝှက် Script တစ်ခုက မိမိကွန်ပျူတာထဲကို လျှို့ဝှက်ဝင်ရောက်သွားပါတယ်။
အဲဒီ Script ကဗိုင်းရပ်စ်လဲမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။သူက Autorun ကနေတစ်ဆင့် ၀င်ရောက်သွားတာပါ။ ဘာဘဲဖြစ်
မသိအောင် ဖြစ်ရတော့တာပါဘဲ။ ကိုယ်တိုင်လဲ..ကြုံခဲ့ရဘူးပါတယ်။ဒါကြောင့်
လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ဖြေရှင်းနည်းလေးကို ရေးပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
ထိရောက်အောင် အဆင့်ဆင့်သွားပါ။ ရောက်ရင် ညာဘက်အခြမ်းမှာ WriteProtect ဆိုတဲ့ အပြာရောင်ဖိုင်လေး
ရှာဖွေခြင်းအား ပန်ြလည်မျှဝေခြင်းသည် မင်္ဂလာတစ်ပါးပါ
ကွန်ပျူတာကလိတဲ့သူတိုင်းသိသင့်သိထိုက်တဲ့ fireFox ကို မြန်ဆန်စေရန် နည်းလေးလေးကို လေ့လာစုစည်းထားသမျှအား ပန်ြလည်မျှဝေလိုက်ပါသည်
• (၁) Address Bar ထဲမှာ about:config ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Enter ခေါက်ပါ။
• (၂) Filter Search Bar ထဲမှာ Network.http.pipelining ကိုရိုက်ထည့်ပြီးရှာပါ။ Value Field မှာ Double Click ခေါက်ပြီး True အဖြစ်ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပါ။
• (၃) Filter Search Bar ကိုပြန်သွားပါ။ Network.http.pipelining.maxrequests ကို ထပ်ရှာပါ။ ဒီ Option ပေါ်မှာ Double Click ပေးပါ။ တန်ဖိုးကို (8) ပြောင်းပါ။
• (၄)network.http.proxy.pipelining အားထပ်ရှာပါ။ Double Click ပေးပါ။ တန်ဖိုးကို True ပြောင်းပါ။
• (၅)filter Search Bar ထဲမှာ Network.dns.disableipv6 ကိုရှာဖွေပြီး Double Click ပေးခြင်းဖြင့် Value ကို True အဖြစ်ပြောင်းပါ။
• (၆)content Interrupt Parsing
• ဒီနည်းလမ်းကတော့ မီးမြေခွေးကို အသုံးပြုနေရင်းနဲ့ Application တစ်ခုခုကြောင့် Page Loading ရုတ်တစ်ရက်ရပ်တန့် ခြင်းကို တုန့်ပြန်မှုမှ ထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
• - about:config Window ရဲ့ မည်သည့်နေရာမဆို Right Click (apple User များ – Ctrl+click) ပေးပါ။ New မှတစ်ဆင့် Boolean ကို ရွေးပါ။ New Boolean Value Pop-up Window ထဲမှာ Content.interrupt.parsing ကိုတည့်ပါ။ Ok ပေးပါ။ New Boolean အတွက် Value ကို True ကိုရွေးပါ။ Ok ပေးပါ။
• (၇) Page Loading လုပ်နေစဉ်အတွင်း ကြန့်ကြာမှုဖြစ်စေသည့် Rendering လုပ်ခြင်းအား အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ တုံ့ပြန်မှု မဖြစ်စေရန်အတွက် အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
• - about:config Window အတွင်းမှာပဲ Right Click ထပ်ပေးပါ။ Pop-up Menu မှတဆင့် New ကိုရွေးပါ ၊ ထိုမှတဆင့် Integer ကိုရွေးပါ။
• - New Integer Pop Up Menu အတွင်း Content.max.tokenizing.time ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Ok ပေးပါ။ Value ကို 2250000 ထည့်ပါ။ Ok လုပ်ပါ။
• (၈)content Notify Interval
• ဒါကတော့ စာမျက်နှာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အကူး စောင့်ဆိုင်းချိန် အနည်းဆုံးဖြစ်စေဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။
• - about:config Window ရဲ့ မည်သည့်နေရာမှာမဆို Right Click ပေးပါ။ New ကိုရွေးပါ။ Integer ကိုရွေး Ok ပေးပါ။
• - Content.notify.interval ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Ok ပေးပါ။value ကို 750000 <ပေးပါ။ Ok လုပ်ပါ။
• (၉)content Notify Ontimer
• မိမိအသုံးပြုပြီးသား စာမျက်နှာတစ်ခုကို ပြန်ခေါ်ရာမှာ စောင့်ဆိုင်းချိန်နည်းပြီး ပိုမိုသွက်လက်စွာအလုပ်လုပ်စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
• - about:config Window ရဲ့ မည်သည့်နေရာမှာမဆို Right Click ပေးပါ။ New ကိုရွေးပါ။ Boolean ကိုရွေး Ok ပေးပါ။ Content.notify.ontimer ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Ok ပေးပါ။ Value ကို True ရွေးပြီး Ok ပေးပါ။
• (၁၀)notify Backoffcount
• Timer-based Reflows တွေကို အမြင့်ဆုံး နံပါတ်အထိ ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ဒီနည်းလမ်းကို သုံးပါတယ်။
• -about:config Window ရဲ့ မည်သည့်နေရာမှာမဆို Right Click ပေးပါ။ New ကိုရွေးပါ။ Integer ကိုရွေး Ok ပေးပါ။ Content.notify.backoffcount ကိုရိုက်ပြီး Ok ပေးပါ။ Value ကို5ပေးပြီး Ok လုပ်ပါ။
• (၁၁)content Switch Threshold
• ဒါကတော့ ၀ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုကနေ ဒေတာတွေကို အလွဲအပြောင်းလုပ်ရန်အတွက် ကြာမြင့်ချိန်ကို အနည်းဆုံးဖြစ် အောင်လျော့ချထားတာဖြစ်ပါတယ်။
• - about:configwindow ရဲ့ မည်သည့်နေရာမှာမဆို Right Click ပေးပါ။ New ကိုရွေးပါ။ Integer ကိုရွေး Ok ပေးပါ။ Content.switch.threshold ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Ok လုပ်ပါ။value ကို 750000 ထည့်ပြီး Ok လုပ်ပါ။
• (၁၂)nglayout Initialpaint Delay
• မီးမြေခွေးနဲ့ ၀ဘ်စာမျက်နှာတွေဖွင့်တိုင်းမှာ မိမိလိုအပ်တဲ့ စာမျက်နှာမရောက်မှီ အမှန်တစ်ကယ် မလိုအပ်တဲ့ ဒေတာတွေ အများအပြား ကိုပါ မီးမြေခွေးက ဒေါင်းလုဒ်ချ လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွက် စောင့်ဆိုင်း ချိန် အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ထား နိုင်ပါတယ်။
• - about:config Window ရဲ့ မည်သည့်နေရာမှာမဆို Right Click ပေးပါ။ New ကိုရွေးပါ။ Integer ကိုရွေး Ok ပေးပါ။ Nglayout.initialpaint.delay ကိုရိုက်ထည့်ပြီး Ok လုပ်ပါ။ Value ကို0ထားပါ။ Ok ပေးပါ။